मगरजाति र साँस्कृतिक उद्योग
गोरे बहादुर खपांगी मगर
राष्ट्रिय मगर माला–नवौं
यसवेला म ७० वर्षमा हिड्न थालेको छु । मैले कलामा स्नातक गर्दाको एउटा सानो घटना सम्झन चाहान्छु । जनकपुर अञ्चलको ठूलो शहर जनकपुरधाम । शहरवाहिर कुवारामपुरमा मुझौलियाका स्थानीय शिक्षाप्रेमीवाट रामस्वरुप–रामसागर डिग्री कालिज स्थापना भएको रहेछ । म श्री त्रिभुवन हाइस्कुलवाट विसं २०२० सालतिरको एसएलसी । यो स्कूल महोत्तरीको गौशाला वजारमा छ । मैले एसएलसी दोश्रो श्रेणी उत्तीर्ण गरेपश्चात वीएसम्म त्यही कालिजमा पढें । यहाँ पढ्दा नेपाली कक्षामा नेपाली पढाउने श्रेद्धय गुरु पण्डित श्री कृष्णप्रसाद आचार्य हाजिरी उठाउने क्रममा खपांगी शव्द मगरजाति वोधक थर थाहा पाउदा श्रद्धय गुरुले जीव्रो बाहिर निकाल्नुभई आश्चार्य प्रकट गर्नुभो र भन्नुभो कि मगर पनि वीएमा । यसवाट मैले थाहा पाएँ कि बाहुनहरु पढेर पण्डितको उपाधि नै प्राप्त गरेको किन नहोऊन उहाँहरुसँग जातीय दृष्टिकोण कस्ता हुदाँरहेछन् । यहाँ यो दृष्टिकोणको व्याख्या गर्न चाहन्न । राष्ट्रिय मगर मालाका विभिन्न भागमा यसवारे संक्षिप्तमै भएपनि शव्द र समय खर्चिने नै छन् ।
मगरहरु इतिहासमा राज्यशक्तिविहीन भएपश्चात यसले आफनो प्राचीन इतिहास र विरासत बाध्यात्मक अवस्थामा भुल्दैगए । कुनै समयको ध्रुवताराको रुपमा रहेको मगरजाति कालान्तरमा विजाति ध्रुवताराहरुको वरिपरि घुम्नथाले र आज पर्यन्त घुम्दैछन् । मगरको आउने सन्ततिले मगर नेतृत्वको पिलो निचोर्नै पर्नेहुन्छ । यसको खिल निकालिनु पर्नेहुन्छ । मलाई लाग्छ युवा नेतृत्वले निर्ममतापूर्वक मगर विकासको प्रगतिमा यो खिललाई फालेर मगर जातिमा व्याप्त अज्ञान्तको अन्त्य गर्ने वाटोमा अघि लागेका मगरहरुलाई तन्नेरी पुस्ताले सुविधा प्रदान गर्नेछ । यसरी राष्ट्रिय मगर माला तयार गर्दै रहँदा मगर जातिमा भने चेतनाको विकास पटक्कै भएको छैन भन्ने कदापि होइन । संक्षिप्तमा भन्नुपर्र्दा यसले आफनो संख्याको अनुपातमा देखिनेगरि विकास त गर्न सकिरहेको छैन तथापि धेरै नभएपनि औंलामै गन्नसक्ने पीएचडीहरु पाउनथालेको छ । उदाहरणको रुपमा मलाई लाग्छ ६४ वर्षको उमेरमा वाग्लुङ निवासी हर्षवहादुर वुडामगरले पीएचडी गर्नुभएको थियो । समय सापेक्ष यो उपाधि प्राप्त अन्य मगर व्यक्तिहरुलाई पनि मालामा ल्याउने प्रयास गर्ने नै छु । धेरैले स्नातकोत्तर पनि गरेका छन् । कतिपयले इन्जिनियरिङ, मेडिकल डिग्री गरेका छन् । आन्तरिक गुणको विकास गर्ने क्रममा मगर जातिले साहित्यतर्फ अभिमूख मगर व्यक्तिहरु पाएकाछन् । यसले आफूमा जीतवहादुर सिंजालीमगर स्याङ्जा निवासीलाई आदिकविको रुपमा सम्मान गर्ने मौका पनि प्राप्त गरेको छ । ऐतिहासिककालदेखि नै सेना र प्रहरीमा अग्रदस्तामा राख्नु यसको धर्म नै हुदैआएको छ । मगरजातिको जीवनमा अहिले पनि अनेकन विधामा महारत हासिल हुनसकिरहेको पक्कै पनि छैन । तथापि वर्तमान अवस्थामा यो जातिले गर्दैआएको प्रगतिलाई हेर्दा निराशाजनक छैन । यदाकदा यो जातिको वौद्धिक व्यक्तित्व र राजनीतिक चिन्तन राख्नेहरुवाट नेपालको राजनीतिमा निर्णायक भूमिकाको नितान्त अभाव रहेको गुनासो पनि सुनिनथालिएको छ । यस मानेमा मेरो आशा र विश्वास छ २१औं शताव्दि नेपाली राजनीति मगरलाई वेखवर राखेर, वेजान राखेर आफूलाई अन्त्य गर्न सक्तैन ।
विश्व भूगोलमा मान्छे देखापर्दा यसले विविध प्राकृतिक अवस्थामा आफूलाई अंगिकृत गर्दैगएको छ । धर्तीमा पदार्पण गर्नुअघि नै यसले विविध मानवीय जातिको लक्षण प्राप्त गरिसेकेको कारणवाट मानवले भूगोलको विभिन्न सर्तानुरुप थरिथरिका प्रकृति आफूलाई ग्राह्ययोग्य वनाउदैआयो । सायद यही कारण मानवशास्त्रीले मानवलाई जातीय हिसावले ४ समूहमा राखेका होलान् र आजसम्म यो आश्चर्यको विषय वनेको छैन । यो विभाजन सजिलै ग्राह्य पनि छ । यो सवै प्रकृतिप्रदत्त थियो । यो अविवादित पनि छ ।
समय गुज्रिदै जादाँ प्रकृतिमा विभाजित मानवजाति सामाजिक रुपान्तरणमा प्रवेश गरेपश्चात डरलाग्दो मानवनिर्मित विभाजनको सिकार हुदैगए । पुर्वीय साहित्यको अथाह भण्डार निर्माण गर्ने क्रममा भृगुऋषिद्धारा स्मरण गर्दै रचिएको ‘मनुस्मृति’ आफैमा बाहुनवादको सर्वोत्कृष्ट घोषणा–पत्र सावित हुनगएको छ । तथापि यसकै कारणवाट सम्पूर्ण पुर्वीय दर्शन, सिद्धान्त, साहित्य आदि इत्यादिको खिलाफमा मगरजाति कम्मर कसेर युद्धको मैदानमा उभिनुपर्छ भन्ने मेरो आशय होइन । १८ दिनसम्म महाभारतको युद्ध हुदाँ ७२ हजार युवाहरुको ज्यान गएझैं गरि सहअस्तित्वको सिद्धान्त स्वीकार गर्ने यो खपाङ्गी द्धन्द्धात्मक भौतिकवादको सिख लिने नेपाली साम्यवादीहरु जसले सर्वहाराको हित गर्ने नाउँमा धनीहरुको सर्वनाश गर्ने वाटोमा कदापि हिड्ने छैन । अमेरिकाली लेखक सामुयल पि. हन्टिङटनले विश्वमा ‘सभ्यताहरुको वीचको मुठभेड नामक कितावमा उल्लेख गरेझैं नभई समन्वयको वाटो रोजिनुपर्छ । भारत स्वतन्त्र हुनुअगावै जवाहरलाल नेहरुले मुसुरीमा पढ्दै गरेकी १० वर्षीय छोरी इन्दिरालाई लेख्नुभएका चिठ्ठीहरुको संगालोमा विश्वमानव समुदाय विभिन्न विभेदवाट ग्रसित छ, उल्लेख छ । यो र यसप्रकारको विभेदको उच्चतम रुप अवश्य पनि उपनिवेशवाद नै हो ।
लगभग ४० वर्षअघि मगरजातिलाई मैले हेर्दा बुझ्दा आफूमा ज्ञानको अनुभूति भएको पाएँ । अर्थात मगरहरु सत्ताको सन्दर्भमा संकेतहीन पाएँ । यस मामिलामा यो जाति वेजान पाएँ । यसलाई उप्काउने सन्दर्भमा एउटा सानो कथा राख्न चाहन्छु । कलकत्ताका भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र वशुको जीवनमा घटित घटनाको संस्मरण गराउन चाहन्छु । अंग्रेजी हुकुमत भोगिरहेका एउटा भारतीय नागरिक वैज्ञानिक हुदैगरेको तथ्य यो हुकुमतलाई पाच्य थिएन । उनलाई उल्लु वनाउन जेनेभामा वैज्ञानिकहरुको सम्मेलन डाकियो र त्यसमा वशुले यो सावित गर्नुपथ्र्यो कि वनस्पतिमा प्राण छ र मान्छेले झैं यसले पनि सुखदुःखको अनुभूति गर्छ । धुर्त अंग्रेजले त्यो भेलामा साइयोनाइड (विष) ले भरिएको सिरिञ्जको प्रयोग गमलाको ज्यूदो विरुवामा प्रयोग ग–यो र त्यो विरुवा मरेन । वशुको खोज झुठ्ठा हो भनि अन्य अंग्रेज वैज्ञानिकहरु अट्टाहस गर्नथाले । आफनो खोजको विश्वस्त वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र वशुले त्यही सिरिञ्ज उठाए र घोषणा गरे यो साइयोनाइड होभने ऊ मर्छ भनि वाँकि रहेको घोल खाइदिए । त्यो चिनीको घोल रहेछ । ती सम्पूर्ण स्याल वैज्ञानिकहरु लज्जित भए । वनस्पतिमा यस्तो गुण हुन्छ भनि पुष्टि गर्न वशुले यहाँसम्म भने कि वनस्पतिको त कुरै नगरौं ढुङ्गा र चट्टानको पनि प्राण हुन्छ । यसरी आफ्नो मुक्तिको लागि वेप्राण झैं वसेका मगरमा प्राण छ र यो जातिले पनि सुखदुःखको अनुभूति गर्छ र मुक्तिको लागि संघर्ष, आन्दोलन, क्रान्ति र वलिदान गर्छ । यसमा यी गुणहरु छन् । यसलाई मध्येनजर राखेर जातीय चर्चा चलाउदा प्रारम्भमा साम्प्रदायिकताको छाप वोक्नुपरेको अनुभव छ । पछि गएर ‘संगठनम् वलम्’ को सिद्धान्तलाइ अंगिकार गरि संगठनको निर्माण गरिदाँ खपाङगी र उसका हम्सफरहरुले साम्प्रदायिकताभन्दा पनि कडा आलोचना विखण्डनवादीको विल्ला भिर्नुपरेको थियो । वास्तवमा यो कदम देश विखण्डनको नभई राज्यसत्ताको जातीय जनसंख्याको अनुपातमा भागवण्डाका सवाल नै थियो । संगठन अघि बढ्दैगयो । संगठनलाई अघि बढाउने क्रान्ति पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा पुगेको देखेर वृटिश विरासतवाट संस्कारित सत्ताले साम, दाम, दण्ड, भेदको मन्त्र प्रयोग गरेर संगठनको मौलिक राजपथमा ढाटहरु तेस्र्याउने ग–यो र गर्दै पनि छ । कृत्रिम कुहिरो सिर्जना गरि संगठनका अगुवाहरुलाई काग वनाउने प्रयास गरिदैछ । सवैलाई सदाको लागि अज्ञान वनाएर सत्यलाई अनन्तकालसम्म मगरजातिवाट टाढा राख्न सम्भव छैन ।
म मुलतः भाषणवाजवाट कलमवाज हुने कसरत गरिरहँदा मेरो कलमले भाषणको संस्कार ओकेल्न पूर्णरुपेर्ण परित्याग गरेझैं मलाई लागेको छैन । यसै सिलसिलामा यो भन्ने धृष्टता गर्न चाहन्छु कि हिजोआज समाजको केहि लव्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पनि सुझवुझ गुमाएर संगठनलाई जातिवादी लाञ्छना लगाइरहेका छन् । यस सम्वन्धमा मैले हजारौं स्थान र सभा समारोहमा नेपाल मगर सँघ कुनै जात जाति विरुद्धमा निर्माण भएको होइन । कुनै जातिविशेषको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको विरुद्धमा निर्माण भएको होइन । यसले कसैको पहिरनको विरोध गर्नु पनि छैन । कसैले परम्परागत रुपमा भक्षण गर्दैआएको भोजनको विरोध गर्नु पनि छैन । जातीय वैवाहिक परम्पराको विरोध गर्नु पनि छैन । कुनै जातिविशेषको विकासलाई अस्वस्थ किसिमवाट इष्र्या गर्नु पनि छैन । यस्ता परम्परालाई कार्यान्वयन गर्ने सर्तमा आफू र आफू रहेको राष्ट्रमा आघात पर्नजान्छ भने निर्ममतापूर्वक यस्ता कदमको प्रतिरोधमा नेपाल मगर सँघले आफूलाई उभ्याउनै पर्नेहुन्छ । यस सन्दर्भमा हालसालैको नागरिकता वितरणको सानो उदाहरण राख्न चाहन्छु । यसवारे कुनै प्रकारको पूर्वाग्रह नराखि म यो भन्छु कि यसमा राष्ट्रिय घोटाला भएको छ र यो कदम राजनीतिक भष्टाचार हो भन्ने अनगिन्ति लेख रचना आएका छन् । वर्तमान निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले फोटोसहितको मतदाता परिचयको लागि अडान लिदाँ यसको विरोधमा उभिएका मधेसी दलहरुको अघिल्तिर निर्ममतापूर्वक घुडाँ टेक्नुपरेको थियो । यस किसिमको असंवैधानिक कार्यमा आवश्यकताभन्दा ज्यादै विदेशी शक्ति लागिपरेको छ । यसो भइरहदा यहाँका जनजातिहरुको संख्या घट्नजान्छ र यसले प्रतिशतलाई पनि धक्का हान्छ । कुनैवेलाको ८ प्रतिशत मगरहरु ३ प्रतिशतमा झर्ने हुन्छ । यसले मगरजातिको साथै माटोसमेत क्षतविक्षत हुदैजानेछ । वर्तमान ४ दलको संयन्त्र यो घटनालाई अझ बढी गति प्रदान गर्न नाइटो दुख्नेगरि वल निकालेर यो अपवित्र, अराष्ट्रिय संयन्त्र लागिपरेको छ । यसले प्रत्येक जातीय संगठनलाई एउटै ठाउँमा एकत्रित हुन हुँकारेको छ । दम्भ गरेर भन्नुपर्दा विश्वविद्यालयवाट प्राप्त औपचारिक शिक्षाभन्दा वाहिर भने पनि समाजशास्त्रीय आधारमा मानव विकास इतिहासमा कलम चलाउनु परेको छ । यो ज्ञान हो र सार्वभौम छ । १९७६ इस्वीसम्म चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष हुनुभएका माओत्सेतुङले आफनो रातो कितावमा भन्नुभएको छ कि मान्छेले आफूलाई मान्छे भएको वास्तविकता थाहा पाउन थालेको लगभग ५ लाख वर्ष भइसकेको छ । यो प्रसंग मात्र हो । विकासक्रमको विषय यसप्रकार रहेको छ : १) गोत्र, २) जनजाति/कविला, ३) जाति/राष्ट्रियता र ४) राष्ट्र । मैले थाहापाए अनुसार मगरहरु जनजातीय अवस्थामा अद्यावधि रुमलिइरहेको हुदाँ सत्ताधारीले गर्दैआएको राष्ट्रघातको विरुद्धमा उभिन सकेको छैन । एनेकपा माओवादी सत्ताधारी हुनासाथ राष्ट्रिय पहिरन फालियो । राष्ट्रिय एकता दिवश र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवश खारेज गरियो । मुलुकमा भएका आन्दोलन वा क्रान्तिको नामावली तयार गर्दा एक शताव्दि लामो निरङकुश जहानियाँ शासन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विसं २००७ मा फालियो । यो आन्दोलनलाई लिष्टमा एक नम्वरमा समावेश गरिएन । तिनै राणा शासकका शालिकहरु टुडिखेलभित्र र बाहिर धेरै छन् । यिनलाई जस्ताको तस्तै राखि शाहवंशीय शालिकहरु भत्काइएका छन् । यी सम्पूर्ण कार्य मलाई लाग्छ विदेशीको इशारामा गराइएका हुन् । इतिहासलाइ इतिहासकै दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । जात जाति वा वर्गको दृष्टिकोणले हेर्नथालियो भने यो देशमा कसैको इतिहास बाँकि रहन्न । इतिहासै वाँकि नरहेपछि मुलुक पनि अस्तित्वमा रहन्न ।
हामी मुलतः जनजाति हौं । जनजातिहरु देशभक्त हुन्छन् । राष्ट्रियतामा विकास हुदैजाला । त्यसपछि मात्रै प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई संस्थागत रुप दिने कार्यमा मगरहरु पनि अग्रसर हुदैजालान् । यो ध्रुवसत्य हो । देशभक्त देशद्रोही हुन्न । युद्ध कतै देशभक्तिपूर्ण छभने देशभक्त योद्धाहरुको जात जाति स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको पाउछौं । यसलाई लुकाउनु पाप हो । भोटसँगका युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने देशभक्तको वयान : वुद्धिवल राना, जीउका भारि, दश भाई भोटेलाई घुँडा धसी मारी । राना (मगर) को उल्लेख छ । वुद्धिवल देशभक्त थिए । प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा (मगर) को घरेलु शासनवाट पीडित भै ज्यान जोगाउन वनारस निर्वासित वसेको देशभक्त प्रवल रानाले दीनानाथ उपाध्यायलाई यसरी जवाफ फर्काए : राष्ट्र नजोगिने अवस्था आएमा भीमसेन थापालाई नेपाल फर्केर सहयोग गर्नुवाहेक कौनै विकल्प छैन । भीमसेन निरङकुश छ तर राष्ट्रवादी छ । राष्ट्रवादीले राजहंसले झैं पानीवाट दुध अलग गर्न सक्नुपर्छ । मगरको मौलिक विचार वाह्य विचारवाट अहिले विटुलिए झैं छ । विदेशी विचारवाट अनावश्यक प्रभावित हुनु भनेको आफनो मौलिक संस्कार जसमा देशभक्ति छ, राष्ट्रवाद छ तिनलाई तहसनहस पार्नु नै हो ।
विविध किसिमका लाञ्छनाहरु खेप्दैआएका विविध जातीय व्यक्तित्वहरु र तिनका जातीय संगठन र संगठनकै महासँघ समय सापेक्ष अजातीय सत्ताधारी कदमहरुको विरुद्धमा वोल्दै रहने र वोलिलाई व्यवहारमा उतार्दैजाने संस्कारवाट आफूलाई लैस गराउने कार्यवाट विमुख भइरहनु भनेको वर्तमान र भविष्यको लागि उठ्ने नभई गिर्नु नै हो ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी जो न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद ग्रहण गरिसकेका व्यक्तित्व हुन् । उहाँको मन्त्रिपरिषदले अंग ढाक्नको लागि राष्ट्रिय पहिरनको उपयोग गर्दागर्दै पनि टाउकोको लागि क्षेत्रीय पहिरनको उपयोग गरेको छ । यसवाट समय रहँदै आफूलाई सुधारोन्मुख राख्न नसक्ने हो भने काजमा पाल्नुभएका रेग्मीको विगत केलाउनु विज्ञहरु बाध्य हुनेछन् । म छेपाराले झैं रंग वदलिइरहने ४ दलीय सिन्डिकेटका सत्तासीनहरुको वारेमा यहाँ खासै कुरा राख्न चाहान्न । एनेकपा माओवादीको हेटौडा महाधिवेशनले प्रज्वलित गरेको खिलराज रेग्मीलाई प्रारम्भमा नेका, एमाले, मधेसी संयूक्त मोर्चाका सभापति र अध्यक्षहरु सुशिल कोइराला, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, विजय गच्छेदार एकएकले सम्मानीय प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष पदमा आसीन गराउने कुराको विरोध थिए । कालान्तरमा अतिचाँडै यी सवै विदेशी गोटीको रुपमा प्रयोग भए र यिनको लागि खिलराज रेग्मीको त्यो पद स्वीकार्य भयो ।
मगर व्यूतनुपर्छ, यिनको तन्द्रा टुट्नैपर्छ, यिनी उठ्नुपर्छ र अन्त्यमा आफनो चारैतिर रहेको खतराको खिलाफमा जाग्नु पनि पर्छ ।
१७ चैत २०६९ तदनुसार ३० मार्र्च २०१३ धोविघाट, ललितपुर
Last Updated on Monday, 01 April 2013 11:43
एमएस थापा र दशौं राष्ट्रिय भेला : छोटो विश्लेषण
 नन्दवहादुर घर्ती मगर
२१–२३ फागुन २०६९ वाँकेको नेपालगञ्जमा ‘राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी’को ‘दशौं राष्ट्रिय भेला’ सम्पन्न भयो । पार्टी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुले जान्नैपर्ने अध्यक्ष एमएस थापाले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको अन्तरवस्तु यसप्रकार छ ।
१. संवैधानिक अवस्था :
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले २०६३ मंसिरमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी ग–यो । त्योवेलाको अन्तरिम संविधानमा संघीयताको ‘स’ उच्चाहरण थिएन । मधेसवादी दलहरु र विभिन्न मोर्चाको नामवाट संघीयताको वारे वोल्न लगाइयो । फोरमले २ माघ ०६३ देखि आन्दोलनको घोषणा ग–यो । २४ माघमा सरकार र आन्दोलनरत पक्ष फोरमसँगको वार्तावाट सम्पूर्ण तराईलाई मधेसको नामले सम्वाधन गर्ने, संघीयतालाई अन्तरिम संविधानमा सामेल गर्ने र समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सहमति भयो । संविधान जारी भएको तीन महिनापछि २५ फागुन २०६३ मा पहिलो संशोधन गरि धारा १३८ (१) थप विस्तार भयो । –मा भनिएको छ, ‘संघीय शासनप्रणालीसहितको अग्रगामी पुर्नसंरचना गरिनेछ ।’
‘एक मधेस एक प्रदेश’ केन्द्रित आन्दोलन ‘मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल’को नामवाट १ फागुन २०६४ देखि सुरु भयो । त्यसबेला तराईमा बसोबास गर्ने पहाडी मूलका नेपालीमाथि वर्वरतापूर्ण आक्रमण भयो । सत्तारुढ पार्टीहरुमा लागेका मधेसी मूलका नेताहरुलाई त्यो आन्दोलनले पार्टी छोडायो । पाँचौं संशोधन २९ असार २०६५ मा धारा १३८ (१ क) थप भयो । –मा भनिएको छ, ‘मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।’
संसारलाई थाहा छ मधेस आन्दोलन वाह्य शक्तिको कारण थियो । धारा १३८ (१) र १३८ (१ क) उनकै प्रतिफल थियो । यसैको जगमा राज्य पुनः संरचना र राज्य शक्ति वाँडफाँड समितिको पहिचानसहितको १४ प्रदेश र राज्य पुनःसंरचनाको लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको ११ प्रदेशको खाका वन्यो । तर, पछिल्लो चरणमा वाह्य शक्तिहरुको स्वार्थमा टकराव आएको कारण १४ जेठ २०६९ पछि संविधानसभाको अवसानले औपचारिकता पायो । संविधानसभा अवसान गराउनेमा विदेशीको एजेण्डा थियो । राष्ट्रिय शक्तिहरुले त्यसलाई सघाएको मात्र हो । विदेशीलाई सघाउनेमा एमाओवादी पहिलो सूचिमा पर्दछ । यो नै ग्राउण्ड रियालिटी हो ।
उपरोक्त धाराहरु अन्तरिम संविधानमा संशोधन तथा थपथाप गर्नमा राजमुपाको के भूमिका रह्यो ? यो कुरा थापाको प्रतिवेदनमा छैन । त्यसैगरी मधेस आन्दोलनले पहाडीयाहरुलाई खेदेर जसरी सरकारलाई झुकायो र योवारे राजमुपाको त्योवेलाको भनाई के थियो ? यो पनि थापाको प्रतिवेदनमा छैन । असंवैधानिक तरिकावाट ४५ लाख नागरिकता वितरण गरि यहाँका आदिवासी जनजातिको प्रतिशतको साइज घटाउदा जातीय मुक्तिको उद्घोष गर्ने राजमुपा वोल्न किन सकेन ? अध्यक्ष थापाको प्रतिवेदनमा यो छैन ।
एमाओवादी क्रान्तिकारी हो भनि चौथो महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । अहिले पनि यो पार्टीलाई घुमाएर क्रान्तिकारिता स्वीकारेका छन् । विदेशी दलाललाई क्रान्तिकारी स्वीकार्ने अध्यक्ष थापा स्वयम् पनि दलाल नै हुन् ।
२. अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति :
विश्वशक्तिको रुपमा उदीयमान चीनलाई तल झार्न अमेरिका र यूरोपको दुई उपाय छन् र ती हुन् (क) तिव्वतलाई चीनवाट अलग वनाउने, (ख) चीनको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने । यी लक्ष्य पूरा गर्न नेपाली भूमिको प्रयोग र भारतसँग सहकार्यलाई अमेरिकाले अनिवार्य सर्त ठानेको छ ।
असारको दोश्रो सातातिर चीनको सत्तासीन पार्टीको विदेश विभाग उप–प्रमुख आइपिङको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आयो र भन्यो, –‘विदेशी शक्तिको कारण नेपालमा जातीय संघीयताले प्रवेश पायो । यो चीनको लागि अहितकर छ । नेपालमा जातीय संघीयता लागू गर्न खोजिए वल प्रयोग गर्न चीन बाध्य हुने ।’ यो थियो चीनको आधिकारिक धारणा ।
एमाओवादीवाट अलग हुने पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन वैद्यपक्षधरहरु जातीय संघीयताको खुवै वकालत गथ्र्ये । पार्टी अलग भइसकेपछिको परिस्थितिमा पिङको प्रतिनिधिमण्डलले नेकपा–माओवादीको अध्यक्ष किरणलाई चीन भ्रमणको लागि निम्तो दिए । वैद्य चीन भ्रमणवाट फर्केपछि उनी र उनको पार्टीले जातीय संघीयताको ‘ज’ उच्चाहरण गर्ने वानी परित्याग ग–यो । यो हो अन्तरराष्ट्रिय ग्राउण्ड रियालिटी । यो वास्तविकतालाई थापाको प्रतिवेदनले छोएको छैन ।
३. वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थिति :
संविधानसभावाट संविधान नवन्नुमा प्रमुख कारक तत्व विदेशी शक्ति हो । अन्तिम लक्ष्यमा पुग्न संविधानसभा विघटन नै उपयूक्त ठाने र त्यसलाई घरेलु शक्तिले सघाएको मात्र हो । तर, अध्यक्ष थापाको प्रतिवेदनको विश्लेषण यसको ठीक उल्टो छ । उनी भन्छन्, ‘संविधानसभा विघटनको मूल कारण घरेलु यथास्थितिवादी शक्ति र ती हुन् नेका र एमाले ।’ एमाओवादीलाई प्रगतिवादी तथा क्रान्तिकारी पथप्रदर्शकको रुपमा स्वीकारेका छन्, थापाले । यो त जनतामा भ्रम फैलाउन एमाओवादीद्धारा सिर्जना गरिएको विचार हो । यही विचार अध्यक्ष एमएस थापाले वोकेका हुन् ।
जातीय मुक्तिकामी जनताको लागि कथित दशवर्षे जनयुद्ध नै मूल वाधक थियो । जातीय मुक्तिको रणनीतिक लक्ष्य वोकेका राजनीतिक शक्तिको लागि उपरोक्त सवै पार्टीहरु प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी हुन् । यथास्थितिवादीवाट एमाओवादी अलग रहन सक्तैन । तमाम् जातीय संगठनहरुका अग्रगामी गतिविधिहरुलाई दशवर्षे जनयुद्धले अवरुद्ध पा–यो । अझ भनौं भने ती सवै पार्टीहरु हाम्रा वैचारिक दुष्मन हुन् । अध्यक्ष थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन यस मानेमा असफल सिद्ध छ ।
४. संघीयताको सवाल :
अध्यक्ष थापाले जातीय संघीयतालाई पार्टीको पहिलो सर्त मानेका छन् । हामीले भन्दैआएको वैचारिक विचलन भनेकै यही हो । जातीय मुक्तिको कार्यनीतिक वाटो ‘जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो’ । संघीयता सहायक कुरा हो । अझ भनौंभने जातीय संघीयता पार्टीको हिजोको लाइन हुदैहोइन । यो त अध्यक्ष थापाले जवरजस्त पार्टीमा लादेको वाटो मात्र हो ।
विश्वको संघीय राज्यहरुको नामावली थापाले आफनो प्रतिवेदनमा जस्ताको तस्तै उतार गरेका छन् । संघीय राज्य हुनुमा ती मुलुकहरुको वस्तुगत स्थिति के थियो सोवारे कहिंकतै विश्लेषण छैन । वस्तुगत स्थितिभित्र मान्छेको विकास पनि पर्दछ । नेपालमा जातीय संघीयता किन चाहियो ? सोवारे व्याख्या तथा विश्लेषण छैन । आफनो देशको जातीय र राजनीतिक विश्लेषण गर्न नसक्नेले विश्व संघीय राज्यहरुको नामावली आफनो प्रतिवेदनमा पेश गरेर लाटो देशको गाँडो तन्नेरी भएको देखिन्छ । खुवै वुझेजस्तो गरि कार्यकर्तामा भ्रम छरेका छन् ।
५. समानुपातिक प्रतिनिधित्व : जातीय मुक्तिको अनेकन कार्यनीतिहरुमध्ये जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई हिजोका दिनहरुमा पार्टीले मूल सर्त ठान्यो र यो अहिलेसम्म कारगर हुदैआएको छ । यो विधि होइन राजनीतिक सिद्धान्त हो । यसवारे वहस र व्याख्या पार्टी पंक्तिमा अपुग नै छ ।
पार्टीको मूल कार्यनीतिलाई अध्यक्ष थापाले संविधानसभा : २०६४ निर्वाचन प्रयोजनको लागि ३३५ सीटको वन्दसूची प्रणालीमा गाभिदिए । वन्दसूचिको ३३५ सीटलाई थापा र उनका सहयोगीहरुले सर्वोपरि थान्दैआएकाछन् । यो पार्टीको हिजोको वाटो होइन । भौतिक रुपमा राजमुपा ज्यूदोजस्तो देखिएतापनि रोगजाँचको आधारमा भने पार्टी मृत्यु (Clinical Death) भइसकेको छ ।
६. धर्मनिरपेक्षता :
अध्यक्ष थापाले धर्मनिरपेक्षता र जातीय राज्य एकैचोटी मागेका छन् जवकि यी दुइटै आपसमा विवादास्पद हुन् । थापाले जातीय राज्य मागेको कुरा पूरा भयोभने ती राज्यहरुमा धर्मसापेक्षको माग बढ्ने निश्चित छ । एकातिर सिंगो मुलुक धर्मनिरपेक्ष हुने र अर्कोतिर जातीय राज्यमा धर्मसापेक्ष । थापाको चिन्तन विरोधाभाष र भ्रम मात्र होइन ‘सिआइए’को एजेण्डालाई सघाएको प्रतित हुन्छ ।
७. पार्टी समीक्षा तथा विश्लेषण :
चौथो महाधिवेशनमा कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरुमा तेश्रो महाधिवेशनको तुलनामा दशौं गुणा बढी उत्साह एवं उमंगले भरिभराउ थियो । अवस्था सिर्जना हुनुमा तत्कालीन प्रजातान्त्रिक जनमुक्ति पार्टीसँगको एकीकरण नै मूल कारण थियो । यो वास्तविकतालाई अध्यक्ष थापाको प्रतिवेदनले किन उठाउन मानेन ? पार्टीको घोषपणा–पत्र चौथो महाधिवेशनले दिनसकेन । गज्याङमज्याङ वनाएर ल्याएको जनमुक्ति विचारधारा पनि प्रतिनिधिहरुको हात–हातमा मात्र दिने काम भयो, वहस भएन । पार्टी घोषणा–पत्र नहुनेमा सम्भवतः राजमुपा नै पहिलो होला । यतिमात्र होइन त्यो महाधिवेशनले एकल जातीय राज्यको एजेण्डावारे वहस तथा छलफल नै भएन । तर, यही एजेण्डालाई थापाले पार्टीको मूल वाटो वनाएकाछन् । यो विलकूल अवैधानिक हो ।
नेता खपांगीलाई वर्तमान नेतृत्वले पार्टीवाट झिकिसकेको पनि एक वर्ष नाघिसक्यो । यो कुरा देश विदेशमा बस्नुहुने सवै कार्यकर्ताहरुलाई थाहा छ । तर, ढिलो चाँडो खपांगी पुनः राजमुपामा फर्किन्छ भनि झिनो आशा वोकेर साविक पार्टीमा तमाम कार्यकर्ता बसिरहेका छन् । यो वास्तविकतावारे थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेखसम्म गरेको छैन । राजमुपामा सहानुभूति राख्ने देश विदेशका शुभचिन्तकहरुको खपांगी र राजमुपा सँगसँगै हिडाउने आशा निराशामा बदलिएको छ । लेख्दालेख्दै यो पनि थप्न चाहान्छु कि चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको वन्दसत्रले केन्द्रीय समितिद्धारा तयार पारिएको आर्थिक प्रतिवेदन ठाडै अस्वीकृत ग–यो । आर्थिक प्रतिवेदन स्वीकृत नभएपछि पार्टीको आर्थिक कारोवार के आधारमा हुदैछ ? यसमा सवैले राजनीतिक चिन्तन गर्नु जरुरी छ ।
८.खपांगी र थापावीचको अन्तरविरोध :
खपांगी र कार्यकतावीच फाटो ल्याउने अध्यक्ष थापाको एउटै अश्त्र हो त्यो ‘राजावादी’ । राजावाद रणनीति हो याकार्यनीति, अध्यक्ष थापाले भन्नसकेका छैनन् । जातीय मुक्तिको उद्धेश्य एवं लक्ष्य प्राप्तिमा यसको असर कहाँनिर छ सोवारे ठोस जवाफ दिनसकेका छैनन् । ढिलो चाँडो उनले यो कुरा दिनसकेनन् भने अहिलेसम्म लुकाएर राखेको कपट उदागिंने निश्चित छ ।
९. अवको वाटो :
पार्टीको उमेर २२ वर्ष पुगिसके पनि यसको आकार र उचाई दुवै हिसावले कमजोर रहनुमा ‘एक्लै हिड्ने नीति’ लाई जिम्मा लगाइदिई अध्यक्ष थापा भागेका छन् । यहि नीतिलाई यथावत राखिरहेमा आउने २२ वर्षमा पनि पार्टी यही अवस्थामा रहिरहने थापाको ठोकुवा छ । यो सतप्रतिशत गलत कुरा हो । पार्टी कमजोरको मूल कारण नेतृत्व हो, एक्लै हिड्ने नीति होइन ।
अवको पार्टीको वाटो संघीयताविरोधीको विरुद्ध संघीयता पक्षधरहरुसँग गठवन्धन गर्नुको विकल्प नरहेको तर्क अगाडि सार्दै एमाओवादीसँगको साविक गठवन्धनलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने थापाले न्वारानदेखिको वल लगाएका छन् । जातीय मुक्तिकामी जनताको लागि एमाओवादी प्रतिगामी शक्ति हो । किनकि, वर्गीय मुक्तिको वाटो हिड्ने पार्टी तथा शक्तिहरु हाम्रा वैचारिक दुश्मन हुन् ।
१०. निश्कर्ष :
नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा एमएस थापाको नेतृत्वमा विसं २०४८ को आमचुनावमा पार्टीले भाग लिदाँ यसले ५० हजार मत पाप्त गरेको थियो । त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको नाउँमा विसं २०५१ को मध्यावधि चुनावमा पार्टीले ८० हजार मत प्राप्त ग–यो । ०५६ सालको आमचुनावमा पार्टीले १३० वटा उम्मेदवार दिएर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी १ लाख मत प्राप्त गरेर छैठौं स्थानमा उभिएको सर्वविदित छ । विसं. २०६४ सालको संविधानसभाको लागि हुने आमचुनावमा पार्टीले पुगनपुग ५३ हजारको हाराहारीमा ल्याई १७ औं स्थानमा झ–यो । यो एमएस थापाको सर्वसत्तावादी नेतृत्वको परिणाम हो । लड्दा २२ वर्ष वितिसक्दा पनि पार्टी देखिने ठाउँमा पुग्न नसक्नु ‘एक्लै हिड्ने नीति’को थाप्लोमा दोष थोपरेर अध्यक्ष थापा उम्केका छन् । यो सतप्रतिशत झुठ्ठा कुरा हो । पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामाजिक (जातीय) विश्लेषण अनिवार्य सर्त हो । अध्यक्ष थापाको प्रतिवेदनमा यो गुण छैन । जातीय मुक्तिको कार्यदिशा छैन । पार्टीको अन्तिम उद्धेश्य तथा लक्ष्य किटान नहुनु यसैको परिणाम हो । राजनीतिवाट नैतिकता दुधवाट माखो फालिएझैं राजमुपाको अवस्था छ । श्रेद्धय जातीय मुक्तिकामी व्यक्तित्वहरु म आशा एवं विश्वास राख्छु कि यहाँहरुलाई जातीय मुक्तिको लक्ष्यमा पुग्नवाट अन्तत्वगत्वा कुनै पनि विरोधी शक्तिहरुले रोक्नसक्ने छैनन् ।
(घर्ती मगर.एम.एस थापा मगरले निश्काशित गरेका चेोथो महाधिवेशनमा निेर्बाचित सधिय परिषद् सदश्य हुन् ।)
Last Updated on Thursday, 05 March 2015 23:23
सामान्य भाषामा भन्नु पर्दा राष्ट्रियता भनेको देशको अस्तित्वमाथि देखा पर्ने वा देखा परेका समस्याका कारण सिर्जित चिन्ता, चिन्तन र समस्या समाधानका लागि गरिने बिभिन्न गतिबिधि हुन । यो नि:शर्त, नि:स्वार्थ र स्वत: स्फूर्त रुपमा देखा पर्नु पर्ने हो तापनि आजको स्वार्थपूर्ण समयमा बिभिन्न स्वार्थका कारण त्यसरी देखा नपर्ने मात्रै होइन कि यदाकदा बिभिन्न रुपमा बिभिन्न स्तरबाट राष्ट्रियताको बिषयमा कृयाशिलहरुका खिलाफमा बिभिन्न किसिमले ब्यबधान र भ्रम सिर्जना गर्ने, निरुत्साहित गर्ने, सहभागीहरुलाई निस्कृय र हतोत्सहित पार्ने जस्ता कामहरु समेत हुने गर्छन् । उठान गरिने बिषयबस्तु र यस्मा संलग्न ब्यक्ति र समूह अनुसार बिषयबस्तुले स्थानीय, राष्ट्रिय मात्रै नभएर क्षेत्रीय र बिस्वब्यापी रुप समेत लिन सक्छ र सामना गरिनु पर्ने समस्याले पनि ।
बिदेशी भूमिबाट राष्ट्रियता गतिबिधि
देशको माया गर्न भूगोलले छेक्दैन र यो आलेख पछिल्लो चार बर्षमा बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुद्धारा गरिएका गतिबिधिहरुमा केन्द्रित हुनेछ । बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुका बीच बिशेष गरी करीब चार बर्षदेखि राष्ट्रियताको बिषयमा धेरै गतिबिधि भएका देखिन्छन । भारतद्धारा नेपाली भू-भागमा गरिएको अतिक्रमण र नेपालीमाथि गरिएका बिभिन्न किसिमका अमानबीय दुर्व्यबहारका बिरुद्ध जून १५, २००९ मा बिभिन्न देशमा कार्यक्रम आयोजना गरिए भने फेसबुक मार्फत बिशेष तयारीका साथ सोही दिन चौबिसै घण्टा बिस्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुले बिरोध कार्यमा सहभागी भए । त्यस्को लागि माइ संसार, अनलाइन खबर, नागरिक न्यूज, डिसी नेपाल, नेपाल अरब, नेपाल डायरी, नेपाल समाचार आदिले सहयोग पुर्याए । माइ संसारको ऐक्यबद्धता उल्लेखनीय थियो जस्को सकृयतामा सो दिनको लागि उपयुक्त थुप्रै सामग्री तयार भएका थिए ।
त्यस्को लगत्तै सार्क क्षेत्रमा देखा परेको शक्ति असन्तुलनका कारण सिर्जित समस्या समाधानलाई सार्क स्तरीय बुद्धिजीबिहरुको सन्जाल तयार गरेर शक्ति सन्तुलनमा केही योगदान दिन सकिन्छ कि भनेर बिभिन्न देशमा छरिएर रहेका बिभिन्न देशका प्रतिनिधिहरु खोज्ने काम शुरु भएको र त्यही सन्दर्भलाई आधार बनाएर माइ संसार लगायत अन्य केही पत्रिकाहरुमा "सार्क बिस्तार प्रसंग र नेपाली परिबेश" लेख समेत प्रकाशित गरिएको थियो । सोही बेला २००९ को सेप्टेम्बरको शुरुतिर अनलाइन खबरमा प्रकाशित “भारतद्धारा नक्कली ‘कपिलबस्तु’ निर्माण” मार्फत अत्यन्तै संबेदनशील समाचारमा भारतमा नक्कली लुम्बिनी र कपिलवस्तु निर्माण कार्य झन्डै असी प्रतिशत संपन्न भैसकेको र २०१२ सम्ममा संपन्न गर्ने किसिमले जोडतोडका साथ काम भैरहेको खबर प्रकाशमा आउँदासम्म पनि त्यससम्बन्धमा नेपालका कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि किसिमका आवाज उठाएको नपाईएकोले सार्क स्तरीय बुद्धिजीबिहरुको सन्जाल तयारको तुलनामा यस्लाई प्राथमिकतामा पार्नु पर्ने ठहर गरी बिभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरुले कपिलवस्तु दिवस अभियान (हाल लुम्बिनी-कपिलवस्तु दिवस अभियान) शुरु गर्न पुगे । आफ्नो बिस्वब्यापी सन्जाल बिस्तार गर्दै छोटो समयमा यस्ले गरेका धेरै प्रयासहरुका बीच केही उल्लेख्य उपलब्धीहरु पनि हासिल गरेको छ ।
बुद्ध जन्मदाको समयमा नेपाल तथा भारत भन्ने देशहरु नभए तापनि बुद्ध जन्मिएको स्थान अहिलेको नेपालको लुम्बिनीमा पर्दछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएकै कारण युनेस्कोले लुम्बिनिलाई बिस्व संपदा सूचिमा समाबेश गरेको हो । बुद्ध बिस्वकै साझा संपत्ति भएको कारण आस्थाका आधारमा कसैले मेरो अथवा हाम्रो भन्छ/न भने त्यस्मा कसैले प्रश्न उठाइराख्नु पर्ने देखिन्न, तर उनको बिस्वब्यापी महत्व र प्रसिद्धीका कारण त्यसबाट लालायित भएर सत्यका पर्यायबाची बुद्धको उन्कै नाममा असत्यको खेती गर्दै नाजायज फायदा लिनका लागि बिस्व जनमतलाई दिग्भ्रमित तुल्याउन गरिने कार्यले नेपालको राष्ट्रियतालाई चुनौती दिने मात्रै नभएर दिग्भ्रमका कारण झुक्किएर र गलत नियतका कारण झुक्याएर बुद्ध जन्मस्थल जान चाहनेहरु गलत ठाउँ पुग्ने र पुर्याइने कामका कारण बर्षेनी हजारौंको मानब अधिकार हनन जस्ता जघन्य आपराधिक काम भएकोले यस्तो संबेदनशील काममा मौन बसिनु हुन्न मानबाधिकार प्रतिरक्षाको लागि पनि ।
ब्यापक जन दबाबका कारण जानकारी सच्याए पनि गुगल र वर्षेनी विश्वभरका करिव ६० लाखभन्दा बढी पर्यटकले अवलोकन गर्ने लन्डनस्थित ब्रिटिश संग्रहालयले पनि वुद्धलाई भारतीय परिचय दिएको, लाखौं बुद्धिस्टहरुमा समेत बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्ने जानकारी नहुने मात्रै नभएर बौद्धमार्गीहरुका बीच अत्यन्तै सम्मानित मानिने रिङपोछेद्धारा समेत विस्वमा नै सबैभन्दा बढी पाठक भएको पत्रिकामध्येको अनलाइन पत्रिका हफिङ्टन पोस्टमा बुद्धबारे भ्रामक जानकारी सहित लेखहरु प्रकाशित गरिएको, मासिक संसारभरिका ११५ मिलियनभन्दा बढी जनताका बीच आफ्ना सामग्री लिएर पुग्ने ३५० भन्दा बढी टिभी स्टेशनहरुको सन्जाल पिबिएसले “द बुद्ध” फिल्ममा उहाँलाई भारती परिचय दिएको, थुप्रै देशको पाठ्य सामग्रीहरुमा बुद्ध नेपालमा नभएर भारतमा जन्मिएको उल्लेख गरिएको, न्यूजवीकका पूर्व संपादक एबं सिएनएनका कार्यक्रम प्रस्तोता जाकारीया जस्ता ब्यक्तिले आफ्नो पुस्तकमा बुद्धलाई भारती भनिएको जस्ता यथार्तताले बुद्ध जन्मस्थलबारे सिर्जित दिग्भ्रम विस्वब्यापी समस्या बनिसकेको प्रमाणित हुन्छ । तर अफसोच राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुबाट समेत यस्तो संबेदनशील बिषय प्राथमिकतामा नपर्नाले कैयौं नेपाली युनेस्कोले समेत लुम्बिनीलाई विस्व संपदा सूचिमा पारेकोले बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भएको कुरा संसारलाई थाहा छ भन्ने भ्रममा छन ।
बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुकै सकृयता किन ?
नेपाललाई बिस्वमा परिचय दिने दुई आधारहरु सगरमाथा र बुद्ध हुन । स्कूल पढदा सबैले सगरमाथा र बुद्धको देश भनेपछि संसारले चिन्छ भनेर पढे तापनि बिदेश गएपछि कत्तिले त नेपाल नै थाहा नपाउने र थाहा पाउनेहरु अधिकांशको मुखबाट बुद्ध भारतमा जन्मिएको कुरा सुन्न पर्दाको पीडाको परिणाम हो यसरी बिदेशमा बस्नेहरु नै यस किसिमका गतिबिधिहरुमा बढी संलग्न हुनुको कारण । त्यसैले अमेरिका निबासी अभिनेता रमित ढुंगानाको ‘बुद्ध बर्न इन नेपाल’ फिल्म बनाउने तयारी होस अथवा अमेरिका निवासी प्रेम गुरागाईं पेटिशन मार्फत नेपाललाई बुद्ध र सगरमाथाको देशको रुपमा चिनाउन र गीतहरु बनाउन, त्यस्तै चीन र हङकङमा तवला सम्राटका रुपमा परिचित हङकङ निवासी हरी श्रेष्ठ हरेक कार्यक्रममा नेपाली, अंग्रेजी र चिनिया भाषामा "बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल" लेखिएको ब्यानरलाई गुरु मन्त्रको रुपमा जहाँ पुगे पनि एकछिन पनि साथ नछोडेको होस अथवा जापानको नागोयामा रेष्टुरेण्ट ब्यबसाय गरिरहेका बिष्णुप्रसाद घिमिरेले चपस्टिकको खोलमा ‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन’ लेखिएको चपस्टिक प्रयोग गर्न शुरु गरेको, त्यसरी नै अमेरिका निवासी पत्रकार रबी लामिछाने "बिस्वले चिन्नेछ नेपाल" कार्यक्रम मार्फत गिनिज बुकमा रेकर्ड कायम गर्न लागुन अथवा बिस्व साइकल यात्री सौरभ दाहाल बिभिन्न देशमा नेपाललाई बुद्ध र सगरमाथाको देशको रुपमा चिनाउन - सबैको श्रोत हो बिदेशमा नेपाललाई बुद्ध जन्मेको देशमा रुपमा नचिनिनुको पीडा ।
यिनीहरु सबै के कुरामा स्पस्ट छन भने यी कममा लाग्दा आफ्नो समय र पैसा खर्चनु पर्ने मात्रै नभएर अनाबस्यक काम कुरो गर्न जत्ति भए पनि समय हुँदा धेरैलाई यस्तो कुरामा नैतिक समर्थन दिने समेत फुर्सद नहुने, कत्तिले त निरुत्साहित गर्ने र ब्यबधान सिर्जना गर्ने काम समेत गर्ने र सरकारका तर्फबाट समेत बिशेष परिस्थितिमा बाहेक सहयोगको नाममा वाध्यताबस औपचारिकता निभाउने कामभन्दा बढी केही हुनेछैन । आफ्नो स्वाभिमानमा चोट परेका कारण स्वत: स्फूर्त रुपमा यसरी लाग्नेहरुमा ब्यक्तिगत स्वार्थ केही नहुने भएकोले बिचलित हुने अथवा जस्तोसुकै ब्यबधानका बाबजुद पनि हतोत्साहित हुने भन्ने प्रश्नै रहँदैन केही स्वार्थबश देखा परेर बिभिन्न निहुँ बनाएर हराउनेहरुमा जस्तो । आखिर सबै कुरो मनै त हो - भित्रैदेखि हुनेलाई भन्नै पर्दैन भन्नै पर्नेले गर्छ नै भन्ने छैन ।
लुम्बिनीकै बढी चर्चा किन?
सगरमाथाको बिषयमा पनि यदाकदा अनाबस्यक बिबादास्पद कुराहरु उठान गरिन्छन र यस बिषयमा बिरोध गरिंदा बिरोधको बिरोध खासै हुँदैन । बुद्ध जन्मस्थल बिषयमा भएका नियोजित तवरबाट सिर्जित दिग्भ्रम निस्तेज पार्ने क्रममा लाग्नेहरुले सिद्धार्थ नेपालमा जन्मिएका हुन त बुद्ध भारतमा, बुद्ध जन्मिएका बेला न त भारत थियो न त नेपाल, बुद्धिज्ममा लाग्नेहरुको लागि त बुद्धको जन्मस्थलको कुरो नभएर उन्का शिक्षा महत्वपूर्ण हुनुपर्छ, बुद्ध आधा नेपालको र आधा भारतको हो, बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिएको कुरो प्रमाणित भैसकेको कुरो हो - यो प्रमाणित गरिराख्नु पर्ने कुरो होइन जस्ता या त नबुझेर या त अप्ठ्यारोमा पार्न या त अनाबस्यक किसिमले समय दुरुपायोग गरिदिनका लागि उठाइने हल्का र हास्यास्पद प्रश्नहरु सामाना गर्नु पर्छ । नक्कली लुम्बिनी निर्माण कार्यमा भारतले अरबौं खर्चिसकेको र अन्तिम चरणमा नै पुगिसकेकोले सक्कली लुम्बिनीमा अझसम्म केही हुन नदिन सफल भैरहेकोमा केही हुन लाग्यो कि त भारतलाई ज्वरो आउनु स्वाभाबिकै हो । तर जनस्तरमा नै भए पनि आजको इन्टरनेटको जमानामा सामाजिक सन्जाल एबं बिभिन्न किसिमबाट गरिएका ब्यापक बिरोधका कारण बुद्ध भारतमा जन्मिएको भन्ने दुस्प्रयास धरायासी हुन सक्ने र नैतिकताको प्रश्नको संभावनालाई ध्यानमा राखी बुद्धले ध्यान र ज्ञान प्राप्त गरेको कुरालाई आधार मानी बुद्धिज्म भारतमा जन्मिएको कुरालाई ब्यापक रुपमा अगाडि बढाउन अग्रसर भएको देखिन्छ भारत । भारत यस किसिमबाट अगाडि बढछ भने यस्मा कसैले पनि बिरोध गर्दैन, सत्यका पर्यायबाची बुद्धको बुद्धकै नाममा आसत्यको खेती गरेर बिस्वका जनतालाई संपूर्ण बिस्व मान्यता बिपरित नक्कली लुम्बिनी र कपिलवस्तु नै बनाएर झुक्याउने कामको मात्रै बिरोध गरिएको हो सत्यको प्रतिरक्षा र दिग्भ्रमित बिस्व नागरिकको मानब अधिकार हनन हुनबाट जोगाउनका लागि ।
लुम्बिनी सकारात्मक दिशातिर उन्मुख
अब लुम्बिनीको प्रश्नमा अनपेक्षित तवरबाट भारतको निकै पछाडि परिसकेकोछ । लुम्बिनीको बिषयमा केही हुन लाग्दा दिल्लीमा हाच्छ्युँ नआउँदै नेपालमा बसेर एन्टिबायोटिक नै खाँदै बर्बराउनेहरुले यो कुरा राम्ररी बुझ्नु आबस्यक छ । स्तर अनुसार अन्य कुरामा ब्यस्त भएको जस्तो देखाउने वा फेसबुकमा नै न्वारानदेखिकै बल निकालेर दिग्भ्रम निस्तेज पार्न कृयाशिलहरुका बिरुद्ध लाग्नेदेखि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गतिबिधिमा प्रभाब पार्नेसम्मका अनुहारहरुको परिचय अधिकांश नेपालीहरुले पाइसकेका छन । भारतको रवैयाबाट अनभिज्ञ नरहेको बिस्व समुदाय भारतबाट सिर्जना गरिने र गर्न लगाइने समस्या न्यूनिकरणका लागि नै एपेकका कार्यकारी निर्देशक सियाओ युनान नेपालमा लुम्बिनी विकासका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पहिला पहिलाको एपेक प्रतिनिधिहरुको नेपाल भ्रमणलाई नेपालभित्र मात्रै सीमित राख्ने परंपरा तोडी भारतीय नेताहरुसंग भेटघाट गर्न गए । राष्ट्र संघमा लुम्बिनीका सम्बन्धमा "फाउण्टेन अफ वर्ल्ड पिस", "वर्ल्ड पिस सिटी" का अबधारणाहरु धेरै अगाडि बढिसकेको छ, जापानको आर्थिक सहयोगमा युनेस्को मार्फत गरिएको अनुसन्धानले धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिले गरेको छ, एपेक र युनिडो लुम्बिनी बिकासका लागि आ-आफ्नै किसिमले ब्यस्त छन भने बिस्व स्तरीय इन्जिनियर प्रो क्वाक लुम्बिनीको वृहत गुरु योजना बनाउने कार्यमा लामो समयदेखि ब्यस्त छन र यो कार्य अब करीब अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले लुम्बिनीमा अब छिट्टै केही भएरै छाडछ - खुट्टा कमाउने कमाइ रहुन, भंडुवाहरु भाँडिरहुन, पलायन हुने भैरहुन । हामी आ-आफ्नो स्तर र क्षमताले भ्याएसम्म बुद्ध जन्मस्थल बिषयमा सिर्जित दिग्भ्रम निस्तेज पार्ने कामलाई नागरिकीय दायित्व ठानेर आ-आफ्नो ठाउँबाट जारी राखौं । आस्चर्यजनक सन्नाटाका बीच पनि सबैतिरबाट बातावरण हाम्रै पक्षमा तयार हुँदैछ ।
शान्तिका प्रतिमूर्ति बुद्धका कारण लुम्बिनी र यस्को वरिपरिको एकीकृत बिकास गर्न बिभिन्न देशका प्रतिष्ठित ब्यक्ति र संस्थाहरुदेखि राष्ट्र संघसम्म अनबरत लागिरहँदा हाम्रोतर्फबाट भने आफूले केही गर्न नसके पनि उनीहरुको चाहना पुरा गर्नमा समेत खासै कार्यतत्परता नदर्शाइनु अत्यन्तै लज्जाजनक हो । संकुचित घेराभन्दा माथि उठन सक्नु आजको आवश्यकता हो । बिस्वले नै महत्व दिइरहेको लुम्बिनी बिकासमा बर्तमानका सकारात्मक पक्षलाई अब पनि सदुपयोग गर्नुको अलावा यो वा त्यो बहानामा ब्यबधान खडा गर्नु भनेको बिस्वकै सामू आफूलाई हास्य पात्रको रुपमा देखाउनुभन्दा बढी केही हुनेछैन । केही गर्न खोज्नेको लागि बिभिन्न स्तरबाट बिभिन्न रुपमा ब्यबधान सिर्जना जतिसुकै गरे पनि लुम्बिनी छिट्टै मेक्का मेदिना र भ्याटिकन सिटी जस्तै संसारभरिका पर्यटकहरुको लागि आकर्षणको केन्द्र बन्ने कुरामा सन्देह छैन । त्यसैले निम्नतम नागरिकीय दायित्व पुरा गर्नुको अलावा गर्न खोज्नेको बाटो ढुक्दै ढुंगा प्रहार गरेर अरुले खुलेयाम र आँफैले आँफैलाई आजीवन मनमनै अपराधी भन्ने बातावरण किन बनाउने? नेतादेखि जंक जनतासम्म भारतको स्वार्थको लागि काम गरिदिने भएकोले नेपालको राष्ट्रियता जति कम्जोर छ भनेर भनिने गरिए तापनि यो सोंचेभन्दा धेरै मजबूत छ । उठान गरिएका संबेदनशील मुद्धाहरुमा मौन बसिदिने अकबर बीरबलको कथाका जस्ता बग्रेल्ती अन्धाहरु मात्रै नभएर नेपालका हितमा हुन लागेका र गरिन लागेका कुनै पनि गतिबिधिमा दिल्लीमा बस्नेहरुलाई हाँच्छ्यू नआउँदै नेपालभित्रै अनेक बहानामा एण्टिबायोटिक नै खानु पर्ने दिग्गज जंक जनताहरु जति देखा परे पनि यस्ले बिशेष अवस्थामा संभाबित खतराबाट जोगिन धेरै हदसम्म सहयोगीको भूमिका निर्बाह गर्नेछ । त्यस्तै नेपालको भू-राजनितिक अबस्थाका कारण नेपाल जसरी धेरैको क्रिडास्थल बन्न पुगेको छ यही भू-राजनितिक अबस्थाकै कारण पनि नेपालको राष्ट्रियता त्यत्ति सहजै गुम्न नसक्ने अवस्था पनि छ । प्रकृतिमा बाँच्नकै लागि कसैलाई पनि समस्या छैन र कुकुर, बिरालो, किरा फटेङ्रा पनि बाँचिरहेकै छन र पनि मान्छे भएर पनि अलिकति हरियो घाँसको पछि लाग्नेहरुले आफूलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो पलायन, नाँगो नाचका भरमा नेपालको राष्ट्रियताको अवस्था मसानघाटमा पुग्न लागेको जस्तो छ भनेर सोंच्नु भनेको सुतुरमुर्गले बालुवामा टाउको लुकाएर सुरक्षित भएको ठान्नुजस्तै हो ।
Last Updated on Monday, 11 March 2013 19:05
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ–दुई शब्द (रा.मगर माला सातौं भाग)
गोरे बहादुर खपाङ्गीमगर
विर्सनै लागे जस्तो छ । वि.सं. २०४५ साल तिरको सम्झना गर्दै छु । तात्कालिन नेपाल लाङ्घाली संघको राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा हुँदै थियो । संघको सम्मेलन लाङ्घाली भवन, चिप्लेढुङ्गामा भै रहेको अवस्थामा वर्तमान नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ निर्माणको प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गर्यो । सम्मेलन मुस्किकले प्रतिनिधिमुलक थियो । खुल्ला मैदानमा गर्न सकेका थिएनौं । त्यसवेलाका राजा विरेन्द्रको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको भ्रमण थियो । शाहिमुकाम पोखरा । त्यसैवेला पोखरा हर्तालमा थियो । शहर सुनसान, पञ्च्यात व्यवस्था विदा लिन हतारमा थियो । जे होस् ।
महासंघको उद्देश्य बारे पनि सम्मेलनमा धेरै नै छलफल भयो अन्तत्वगत्वा त्यसमा पनि मत्यैकता भयो । महासंघको उद्देश्यबारे एकाध बुँदाहरु निर्णय गरियो ।
१. मुलुकका सवै जातिय संगठनहरु महासंघका सदस्य संगठनहरु हुने ।
२. मुलुकमा देखा परेका जातिय समस्याहरु सदस्य संगठनसंग परामर्श लिन महासंघले उनिहरुलाई परिपत्र गर्ने ।
३. सदस्य संगठनहरुबाट आएको लिखित परामर्शहरु बहुमतको निष्कर्षमा जाने ।
४. यहि निर्णय सदस्य संगठनलाई महासंघले जानकारीको लागि परिपत्र गर्ने ।
५. महासंघको सचिवालयको अल्पमत/बहुमत सँग तत्वीषयमा सरोकार नहुने ।
६. सदस्यसंगठनहरु सार्वभौम रहने, आदि ईत्यादि ।
पञ्च्यात व्यवस्थाको अवसान पछि २०४७ बैशाख २२ गते काठमाडौंको महेन्द्र रत्न बहुमुखि क्याम्पस ताहाचलको सभाकक्षमा जातिय समस्याका सरोकारबालाहरु लगभग २०० भन्दा बढिको संख्यामा उपस्थित भए र महासंघ स्थापना एक स्वरले गरे । जन्मको नाउँ “नेपाल जनजातीय महासंघ” राखियो । जनजातियको साटो जनजाति राख्ने पक्ष अति अल्पसंख्यक भए । ति मध्य एक म आफै पनि थिएँ । महासंघ बामे सर्न थाल्यो । प्रारम्भमा यसको सचिवालय महासचिवले संचालन गथ्र्यो, झण्डै–झण्डै यो संस्था राष्ट्रसंघकै ढाँचामा निर्माण भएको थियो । पोखरामा यसको विजारोपण गर्दा ताका सुरेश आले र म मा यहि अवधारण थियो । नेपाल मगर संघको सिफारिसमा जानुभएको सुरेश आले जी. महासंघको प्रथम महासचिव बन्नुभयो । अवधि ३ वर्षको हुने गथ्र्यो । महासचिव बन्ने आधार जातियता थियो । यसको अर्थ एउटै जातिले लगातार दोहोर्याएर बन्न पाउँदैन थियो । उसले अर्कोपल्ट बन्नको लागि आफ्नो पालो कुर्नुपथ्र्यो । सायद अद्यावधि महासंघमा यहि परम्परा छ ।
समय हिंडिरह्यो, हिंड्दै छ, हिंडिरहने छ । महासंघले समय सापेक्ष/निरपेक्ष आफुलाई बदल्दै लग्यो । यसपछि महासचिवमा परशुराम तामाङ्ग, बालकृष्ण माबुहाङ्ग, ओम गुरुङ्ग बन्दै गए । त्यसपछि पासाङ शेर्पा अध्यक्ष बने । हाल राजकुमार लेखि (थारु) अध्यक्ष हुनुहुन्छ । जुन अवधारणा माथी यो महासंघको प्रारम्भिक ईमारत बनेको थियो । त्यसमा सुरेश आलेकै कालमा परिवर्तन आउन थालेको थियो । महासंघले यसको सदस्य संगठनको सार्वभौमिकता अपहरण गर्न थाल्यो । आले पश्चातका हरुले उहि बाटो अख्तियार गर्दै लग्यो । महासंघले जातीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार सचिवलायबाट पारित गरि सदस्य संगठनहरुलाई सोही अनु्रुप गर्नु भन्ने परिपत्र पठाउन थालियो । सदस्य संगठनहरुमा यो विषय बारे विल्कुलै छलफल गर्ने समय दिइएन । संगठनको स्वरुप जातिय, निर्णय राजनितिक हुन थाल्यो । अद्यावधि महासंघका कतिपय निर्णयहरु राजनितिक प्रकृतिका छन् । म आशा र विश्वासमा छु कि आउनेहरुले यसमा समसामयीक सुधार गर्दै जालान् ।
हामी मध्य धेरैलाई थाहा होला अमेरिकाका आदिवासी (रेड ईन्डियन, हाल नेटिभ अमेरिकन) को लागि अमेरिकाली गोरा सत्ताले सुरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरिदिएको छ । आदिवासिलाई आइ.एल.ओ. १६९ निर्णय बमोजिम एकरत्ति तल माथि नहुने गरि यो व्यवस्थामा राखेको छ । त्यसैमा नेटिभ अमेरिकनहरु मग्न छन् । वासिङ्गटन डि.सि.का गोरा सत्ताधारिहरु पनि मग्न छन् । त्यहाँका रेड ईन्डियनका इतिहाँस संघर्षमय छ । असंख्यले पाँच सय वर्ष अघि आफ्नो भूमिमा युरोपेलीहरुको पहिलो पाईला देखि नै स्वाभिमानी अमेरिकि आदिवासीहरुले त्यसको विरुद्धमा ठुलो–ठुलो युद्ध गरेका छन् । वासिङ्गटन, न्यूयोर्क आदि शहरुहरु रेड ईन्डियनका चिहानहरुमाथी बनेका हुन् । यिनिबारे अध्ययन गर्न आज पनि उनका किताबहरु खुल्ला छन् । उनले लडेका युद्धका इतिहाँसहरु, इतिहाँसकै गर्तमा छन् । रेड ईन्डियनहरु आज ईतिहाँस विहिन झैं भएका छन् । रगत र पिडाले भरिपुर्ण इतिहाँसको ठाउँ आत्मसन्तुष्टिले ओगटेको छ । वासिङ्गटनका हिजोका मालिक आज अमेरिकाको खोल्सा खोल्सीका राजा भएर आनन्दी मनले साग र सिस्नो खाएर बसेका छन् । राष्ट्रसंघिय (अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठन आई.एल.ओ.)ले आदीवासीको यो आनन्दी मनलाई साक्षी किनाराको रुपमा सदर गरिदिएको छ । विश्वका आदिवासी ठालुहरु आई.एल.ओ.का कर्मठ साक्षी भएका छन् र उनका आदिवासीहरु विविध किसिमका समस्यालाई लिएर आज पनि आन्दोलनरत छन् । दुर्भाग्य अमेरिकाली नेटिभ अमेरिकन अमेरिकामा हुँदै गर्ने राष्ट्रपतिय चुनाव बारे विल्कुल वेखबर रहन्छन् यसमा उनिहरुनिर राजनैतिक चुनावको सहभागी बन्न नपाएको गुनासोको आभाष देखिंदैन उनिहरुमा ।
अब म पुनः नेपालकै क्षितिजतर्फ आउँदै छु । म मगर भएर पनि मगर जाती र नेपालका अनन्य जातीहरुबारे विद्धवता राख्ने मान्छे होईन । म जहाँ पुँगें, जे देंखें त्यहि कुराको सवाई कहन्छु । नेपाल आदिवासि जनजाति महासंघको न्वारनको नाउँ यसप्रकारको थिएन । यो नाउँमा परिवर्तन आएको छ । यसमा आदिवासि शब्दको प्रयोग थिएन । कालारन्तरमा यसको प्रयोग हुन थाल्यो । के यो शब्द राख्दा नेपाली आदिवासि अगुवाहरुको माझ व्यापक छलफल भएको हो ? यदि हो भने यसको जानकारी श्यामश्वेतमा आदिवासि बसोवासमा आएको छ ? आदिवासिबाट जातिलाई बाहिर ल्याई संघर्षमा अघि लागेकाहरुले अन्य मनस्क रुपमा स्विकारोक्ति जनाउनु पर्दाको पिडा कम गराउन मल्हम पट्टिको रुपमा आदिवासि र जनजाती शब्द फरक छन् भन्ने देखाउन यिनको विचमा एउटा तेर्सो धर्साको प्रयोग भयो । लामो समयसम्म यो यहि अवस्थामा रह्यो । नमालुम हिजो आज एक्कासी यो धर्सो गायब भएको छ । आदिवासि चारित्रिक विशेषतालाई यसको कउनै मतलब छैन । यी र यस्तै हर्कतले नेपाली आदिवासिलाई त्यसतर्फ अभिमुख गराउँदै छन् जहाँबाट आदिवासिका जातिहरु बाहिर आएका थिए । मेरो विचारमा आई.एल.ओ. १६९ ले मर्फिया दिँदै आदिवासिको प्रगतिशिल स्वरुप जनजाति पनि लुप्त गराउँदै लग्नेछ, फगत रहन्छ आदिवासि ।
नेपाली माटोले यहाँका आदिवासिलाई अस्टेलियाका आदिवासि अबओरिजन, अमेरिकाका नेटिभ अमेरिकन, क्यानाडाका आदिवासी फस्ट न्याशन, भारतका आदिवासी, जापानका आदिवासी आइनु, बाङ्गलादेशका आदिवासी चक्मा भन्दा भिन्न बनाएका छन् । नेपाली आदिवासी, आदिवासी मात्र नभई जनजाती भएको छ । दृश्य/अदृश्य ताकतहरु नेपाली आदिवासिहरुलाई प्रगतिशिलताबाट स्थिरतातर्फ लानेमा भगरिथ छन् । म लेख्छु कम, बोल्छु बेसी । यसैक्रममा आदिवासि शब्दको चरित्रबारे व्याख्या गर्दा यसलाई मैले प्रगतिशिल, विकाशसिल, अग्रगामीको ठिक उल्टो स्थिर पाएको छु । यो हुनु आफैंमा एउटा ऐतिहाँसिक आदर हो । नेपालले देशको स्वरुप ग्रहण गरे पछि यहाँका अग्रिम वासिन्दाहरुले आदिवासिको सेहरा स–सम्मान प्राप्त गर्दै आएको छ । तसर्थ यो शब्दले हाम्रो मनमा बास गर्दै आएको छ । यसबारे हामी कुनै किसिमको सम्झौता गर्न तयार छैनौं र गर्दा पनि गर्दैनौं र गर्नुपनि हुँदैन । यहाँ चर्चा मात्र यसको विशेषताको गरेको हुँ । यो आदिवासिसँग पितृभूमि छैन । मातृभूमि छ । यो भनाई आदिवासिको लागि सार्वभौम छ । यो अर्थमा यो सामुद्रिक जहाजको पन्क्षि हो । बासको लागि जहाजै चाहिन्छ ।
आदिवासीको सन्दर्भमा स्वर्गिय डा. हर्क गुरुङ्ग पटक–पटक आफ्नो उद्गारमा मलेशियाको आदिवासी बारे सम्झना व्यक्त गर्नुहून्थ्यो । त्यहाँका आदिवासीलाई भुमिपत्र भन्ने गरिन्छ । यसैक्रममा वहाँले मलेशियाका पुर्व प्रधानमन्त्री डा. महाथिर बिन महम्मदले भन्नुभएको कुरा उठाइरहनु हुन्थ्यो । महाथिरको भनाई थियो मलेशियामा तिन जाति बसोबास गर्छन् । एउटा चिनियाँ मुलका, एउटा भारतीय मुलका र अर्का चाहिँ मलेशियाकै भुमिपुत्र । कथम्कदाचित् मलेशियामा डरलाग्दो विपक्ति चाहे प्राकृतिक होस् चाहे मानव निर्मित आउन थाल्यो भने अगाडि भनिएका दुई जातिहरु आ–आफ्नो पितृभूमि फर्केर आफूलाई सुरक्षित राख्ने योजनामा हुन्छन् । तर दुर्भाग्य, मलेशियाका भुमिपुत्रका लागि पितृभुमि नभएको कारणबाट उनिहरु मलेशियाका धर्ति फाटेमा त्यहीं समाहित हुन्छन् । आदिवासिको परिभाषा महाथिरले यसप्रकार दिनुहुन्थ्यो भनि डा. हर्क गुरुङ्ग सगर्व आदिवासिहरुको जमघटमा भन्ने गर्नुहून्थ्यो ।
नेपाल मगर संघको दोश्रो र चौथो राष्ट्रिय महधिवेशनको प्रसँग राख्न चाहन्छु । दोश्रोमा नेपाल लाङ्घाली परिवार संघबाट परिवार झिकियो र चौथोमा लाङ्घाली शब्द झिकेर त्यसको ठाउँमा मगर राखियो । लाङ्घाली शब्द मगर प्रतिनिधिहरुको लागि मगर शब्द भन्दा कता हो कता प्रिय भएको रहेछ भन्ने कुरा मैले चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पाएँ । प्रतिनिधिहरुको भावना र भावुकताले बहसमा लामो समय लियो । अन्त्यमा वास्तविक धरातलमा प्रतिनिधिहरु आए, आउनै थियो । आज पर्यन्त लाङ्घाली शब्द संज्ञा विशेषण भई कतिपय ठाउँमा कार्यरत छ । मगर जाति हो, भाषा होईन । भाषाको रुपमा मगर भाषा भनिन सक्ला । स्थायी पहिचान जाति हो । अन्य पहिचान बैधानिक छन् । अस्थायी छन् । अनि परिवर्तनशिल पनि छन् । यहि स्थाई पहिचानले सम्मानित हुन चाहेको छ । थाहा नपाउनेहरुलाई यो सम्मानयुक्त पहिचान कर्मठ अगुवाहरुले दिंदै जानुपर्ने हुन्छ । त्यो सम्मान नेपालको सन्दर्भमा सिंहदरबारमा जनजातिले खेल्न सक्ने निर्णायक भुमिकाबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । अन्य आदरयुक्त पहिचानहरु तपशिलमा छन् । यो सम्झौता विहिन छ । संघबाट लाङ्घाली शब्द झिक्दा त्यसको अपमान होईन, त्यसले उपयुक्त र सक्षम शब्द “मगर” को लागि स्थान रिक्त गर्नुपरेको मात्र हो । यसरी नै हामिले आदिवासि शब्दको स्थानमा जनजातिलाई राख्न सक्षम हुनुपर्छ । यस्तो निर्णय वेलामा गर्नुपर्दा पिलोलाई निर्ममतापूर्वक निचोरेर खिल निकाले झैं नै हो । आउने दिनमा जनजातिको स्थानमा राष्ट्रियता र राष्ट्रियताको स्थानमा राष्ट्र आउँछ र यसको लागि नेपाली आदिवासिहरु र यसबाट बाहिर आएका अगुवाहरुले हरेक विकासको स्वागतार्थ तम्तयार रहनुपर्छ, बाधक बन्नु हुँदैन । अन्यथा हाम्रो भाग्य लेख्ने कार्य “भावि” कै मा बन्धक रहिरहनेछ ।
यो राष्ट्रिय मगरमालाको अन्त्य गर्नु अघि थोरै शब्दमा घरेलु मामलाको प्रसँग पनि कोट्याउन चाहन्छु ।
नेपालमा मगर वा यस्तै अन्यले जानेर वा नजानी आ–आफ्नो जातिय संगठनको निर्माण गर्दा वा गर्दै रहँदा नामाकरणमा कहिँ कतै आदिवासि शब्द को प्रयोग गरेको पाईदैंन । साँच्चै भन्नुपर्दा, यो निर्माण दुधको दुध पानीको पानी नै थियो । यसमा प्रदुषण थिएन र यो अवस्था अहिले सम्म पनि छ । यो नामाकरणमा आदिवासि शब्द थप्नुपर्छ भन्ने सोंच सम्म पनि यसका अगुवामा छ जस्तो लाग्दैन ।
आरनबाट अर्जापेर ल्याएको हतियारले जति वेला पनि बोसो काट्दै रहनुपर्यो भने यसको दाँत त झर्दैन तर यसको पाईन उत्रेर यो भुत्ते हुन जान्छ, यो सर्वमान्य छ । नेपाली आदिवासिको अवस्था यस्तै नहोला भन्न सकिने नेपालको वर्तमान अवस्था देखिदैन ।
सरकारबाट सहयोग प्राप्त आदिवासि जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानको प्रारम्भिक नाम नेपाल राष्ट्रिय जानजाति विकास समिति नै थियो । कालान्तरमा यसमा पनि आदिवासि शब्दको प्रयोग भएको छ । अब म यसबारे पट्यार लाग्ने गरि लेख्न मन पराउँदिन । तथापि केही साधारण कुराहरु मात्र लेख्न मन लागेको छ । हाम्रो बाटो लामो र दिर्घकालिन छ । यसको बावजुद यि बाटो अप्ठ्यारा पनि छन् । लामो यात्रामा थाक्नु स्वभाविक छ । थकाई मार्नू पर्छ तर लक्ष्य प्राप्त नगरि फर्कनु बुद्धिमानि कदापि होईन ।
अन्त्यमा एकाध वैचारिक कुरा राखेर म आफ्नो लेखनि रोक्न चाहन्छु । आदिवासि सिधा साधा हुन्छन् । यस्तो वचन हामिले आफ्नो गाउँ–ठाउँमा गैर आदिवासि बाट श्रवण गर्दै आएका छौं । यस्तो आदिवासि मुलतः देशभक्त हुन्छन् । तसर्थ इतिहाँसमा ब्रिटिश भारतसँगको युद्धका नायकहरु देशभक्त थिए । यसलाई मध्यनजर गर्दा सामान्यतयाः आदिवासि समाज देशभक्त हुन्छ राष्ट्रवादि हुँदैनन् । राष्ट्रवादि विकासशिल छ । जनजातिको विकास राष्ट्रियतामा पुगेपछि मात्र राष्ट्रवादि भावनाको सहि र सटिक रुपमा विकास हुने गर्छ । यसकारण विगतको संविधान सभामा २१७ जना मात्र आदिवासिहरुलाई सभासद्को रुपमा लगिएको थियो । तसर्थ पनि उनिहरु त्यहाँ देखिने गरि कउनै प्रकारको राजनितिक भूमिका खेल्न सफल भएनन् । मधेशीहरु मुस्किलले ८०/८५ जनाजति सभासद् थिए । उनिहरुले नेपाली राज्यसत्तामा आधा हिस्सा प्राप्त गरे । विडम्बना, उनिहरुले आफुलाई कहिल्यै आदिवासि वा जनजातिको संज्ञा वा विशेषणबाट सुशोभन गर्ने कार्य गरेनन् । फरक यहि हो ।
यसको विट मार्नु अघि अप्रासाङ्गिक नै सहि, चैत्र १,२०६९ को दिन गठित मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको नेतृत्वमा निर्माण हुने मन्त्रिपरिषद्मा मलाई लाग्छ जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व गराईएला झैं छैन । यसको एउटा प्रमुख कारण बहालवाला प्रधानन्यायधिशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको चयन सामान्यतयाः (विशेषतया ?) व्यूरोक्रेसिका पुर्व वा बाहालबालाहरुलाई मन्त्रिपरिषद्का सदस्य बनाइने सर्त राखिएको छ । जुन शर्तमा जनजातिहरु विरलै छन्, यो शर्त आफैंमा षडयन्त्रमुलक छ भन्ने वास्तविकता ढिलो चाँडो आदिवासिका जनजातिहरुले बुझ्दै जानेछन् । जे भए पनि बाँचौं, देख्न पाईन्छ र गर्न पाईन्छ ।
राष्ट्रिय मगरमाला सातौं भाग धोविघाट, ललितपुर मितिः २०६९ चैत्र २ गते (१५ मार्च २०१३)
Last Updated on Sunday, 31 March 2013 03:36
विनोद चैधरीको सफलता र गरिब देशको सुचि
पूँजिवादी मुलुक भनिएका युरोप तथा अमेरीकाको कुनै शहरको रेष्टुराँमा मालिक र मजदुर एउटै टेबुलमा बसेर संगै भोजन गरेको उदाहरण देख्न सकिन्छ । जुन गुणस्तरको खाना मालिकले खान्छ, त्यहि गुणस्तरको खाना उस्को मजदुरले पनि खान्छ । मालिकले त्यो भोजनको जति मुल्य तिर्छ त्यति नै उनको मजदुरले पनि तिर्न दक्षता राख्दछ । तर हाम्रो जस्तो देशमा उद्योग चलाउने मालिकले खाने चामलको गुणस्तर र उसकै उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले खाने चामलको गुणस्तर विनिमय दक्षताको कारण तात्विक रुपले फरक पर्दछ । संगै बसेर खाने कुरा त परको कुरा हो ।
यहि भएर धनी देशहरुका मालिक र मजदुरबीचको सम्बन्ध सौहार्द हुन्छ । मालिक विश्वको धनी हुदा त्यसमा उस्को मजदुरहरुले पनि गौरानुभूति गर्दछन् । मजदुरहरुले मालिक विरुद्ध हतियार नै उठाउनु पर्छ भनेर हसिया र हथौडा अंकित झण्डा बोकिरहनु आवस्यक ठान्दैनन् । तर गरिब देशका मजदुर तथा जनताले मालिकले जतिसुकै प्रगति गरेतापनि “ कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मत” भने झै महशुस गर्दछन् ।
नेपालका एक उद्यमी विनोद चौधरी १३ सय ४२ औ स्थानमा विश्वको धनीको सुचिमा रहेको अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने आर्थिक पत्रिका फोब्र्सले प्रकाशन गर्यो । यसले नेपालमा चौधरी नै धनी भएको कुरा प्रष्ट भयो । यो कुरा चौधरीलाई मात्र होईन् हामी नेपाली सबैलाई खुसीको कुरा हो । यसले नेपालको अन्तराष्ट्रिय चिनारी दिएको कुरालाई नकार्न हुदैन । चौधरीले त आफुले नोबेल पुरस्कार नै पाएको अनुभूति छापालाई दिए । कुनैपनि उद्यमीले यसरी सफलता पाउनु उस्को लागि खुसी र गौरवको कुरा नै हो । आफुले हात हालेको क्षेत्रमा सफतापाएको हर्ष हो यो । किन की कुनै पनि व्यपारी तथा व्यवसायीको लक्ष्य भनेकै आफु धनी नै हुनु हो ।
तर उनको यो सफलतालाई यो देशका मजदुर, किसान र सामान्य जनताले कसरी लिएका छन् ? यो प्रश्न प्रमुख कुरा हो । अरु छाडि दिऔ, साहुको ऋण बोकेर उनकै उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरुले यसमा गौवानुभूति गरेका छन् कि छैनन् ? दुरदराजमा मलको अभावसंगै वर्षभरि खान नपुग्ने खेति गर्ने ति गरिव किसानले यो समाचार सुनेका छन् कि छैन ? विहान बेलुका हातमुख जोर्नपनि धौधौ औसत नेपालीलाई यो समाचारले राहत दियो कि दिएन ? सडकको पेटीमा बसेर मकै पोल्ने आमाहरुले, नाङ्लोमा खैनी चुरोट बेच्ने चेलीहरुले, पुलिसको लाठिसंग पैठेजोरी खेल्दै मजबुरीले फुटपाथमा सामान बेच्नेहरुले, ठमेल असनमा ठेला रिक्सा तान्नेहरुले र थोरै ज्यालामा भारी बोक्ने दाजुभाईहरुले विनोद चौधरी विश्वको धनीहरु मध्य एक भयो रे भन्ने समाचार सुने कि सुनेन् ? सुने भने उनिहरुले कसरी गौरव गरे होलान् ? एउटा गरिब र अर्को धनीको मनोविज्ञान बुझ्न अरु कुनै ठाउ जानु परेन, हामीले नै साक्षतकार गरिरहेका छौ ।
चौधरी विश्वका धनीहरुको सुचिमा परिरहदा उनको देश भने अझै गरिव देशको सुचिमा नै छ । देशमा चरम वेरोजगार छ । अधिकांश जनताको आय निम्न स्तर छ । आर्थिक व्यवस्थापन डामाडोल छ । राजनैतिक स्थिरता छैन । युवा विदेशीनु परेको अवस्था छ । एक तवरले हेर्दा नेपालको आन्तरिक अवस्था ज्यादै नाजुक छ । यद्यपि, चौधरी विश्वका धनीहरुमा गनिन पुगे । तर उनको देशले फड्को मार्न सकेको छैन । जो सुकैको पनि आधार भनेको उस्को समाज र देश नै हो । कामजोर आधार जगमा आकासिएको महलको प्रकृति कस्तो होला ? दरिद्र समाज भएको परिवेशमा व्यक्ति धनी हुनुले के महत्व राख्छ ? खाएर जमाएको धन र नखाई जमाएको धनमा के फरक होला ?
आज समाजवादी आखाबाट हेर्न आवस्यक छ । समाजवाद भन्ने वितिकै त्यो कम्युनिष्टहरुको कार्यक्रम जस्तो लाग्छ । तर त्यो होईन । समाजवाद भनेको आर्थिक प्रतिफलको राज्यकरण होईन, समाजिककरण हो । यो बेला राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका नअपनाएर सहजकर्ताको भूमिका मात्र निभाउन् । पश्चिमा मुलुकलाई पूजिवादी मुलुक भनिएको छ । तर यो आरोप राजनीतिक मात्र हो । वास्तवमा ति मुलुकहरुमा व्यवहारमा सामाजवादी कार्यक्रम नै छ । भएको श्रोतसाधान सामाजिककरण गर्दैछन् । राज्यमा भएको श्रोतसाधनको उत्पादन र वितरण जनता तथा समाजको पहुचमा पु¥याउने आर्थिक नीतिहरु अवलम्बन गरिएको छ । फ्रान्सले त संविधानमै आफुलाई समाजवादी मुलुक भनेको छ । बेलायतमा पनि लेबर पार्टीका नेताहरु आफुलाई समाजवादी नै भन्दै आएको छ । जसरी भएपनि आर्थिक प्रतिफल समाजका जनताहरुको हातसम्म पुग्नु पर्छ भन्ने मौलिक अवधारणा नै हो समाजवाद । समाजवादमा कमसेकम न्युनतम आधारभूत आर्थिक आवस्यकता पुरा भएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्ति राज्यलाई प्रगतिशील कर तिर्दै विश्वको धनी हुदा त्यहाका श्रमीक मजदुरले गौरवको अनुभूति गर्दछ । किनकी त्यहा सबै अघाएको हुन्छ ।
पूजिवाद व्यक्ति नाफाले चलायमान रहन्छ । त्यहा श्रमीकहरुको शोषण हुन्छ । धनी झन धनी हुने र गरिव झन गरिब हुने अवस्था हुन्छ । यसले धनी र गरिवबीच द्वेष श्रृजना गरेको हुन्छ । उक्त पत्रिकाले अमेरिकी डलर एक अर्ब चौधरीसंग सम्पति भएको घोषण गरेको छ । लगभग ५ बर्ष अगाडि ५० करोड अमेरिकी डलर थियो भनेका छन् । यत्रो छोटो समय अवधिमा उनले नाटकीय रुपमा थप ५० करोड कमाएर १ अर्ब बनाउनु भनेको ठुलो नाफा हो । यो यसले नै पूजिवादको चरित्र प्रष्ट्याएका छन् । त्यो नाफा सृजना गर्न उनको श्रमिकहरुको श्रम अवस्य प्रयोग भएको छ । भलै उनले श्रमको मूल्य तिरेता पनि ।
एउटा व्यक्ति धनी हुन तथा देशको सम्पन्नताको लागि उनै गरिब मजदुर, किसान र श्रमीकहरुको कति हात हुन्छ भन्ने कुरा विश्वका प्रख्यात लेखक म्याक्सिम गोर्कीको “आमा” उपन्यास हेरे हुन्छ । सो उपन्यासमा एक श्रमिक मुख्यपात्र पाभेलले यसो भन्छ, “ साथीहरु हो, हामी त्यस्तो जनता हौ कि हामीले चर्च र फ्याक्ट्री बनायौ । हामीलाई नै बाध्ने साङलाहरु हामीले नै बनाएका हौ, हामीले नै सिक्का रुपैया कुँद्छौ । हामी त्यस्तो जीवित शक्ति हौ जस्ले नै यो संसारलाई कोक्रादेखि चिहानसम्म खुवाएका छौ र मोजमस्ती दिलाएका छौ....हामी काममा अगाडि तर जीवनमा पछाडि छौ । तर हामीलाई कस्ले ख्याल गर्ने र कस्ले हामीलाई स्यावास भन्ने ।
” हो, तिनै श्रमिकहरु हुन जस्ले विनोद चौधरी बनाए । त्यसको लागि ति श्रमिकहरु हार्दिक कृतज्ञताको पात्रहरु अवस्य हो । तिनको उद्योगको वस्तुको उपभोग गरिदिने तिनै औसत नेपाली नै हुन । साहुको ऋण काढेर भएपनि जीविका धान्नेहरु नै उनको बजारको क्रेता हुन । यसको बदलामा देशले पक्कैपनि विनोद चौधरीबाट अपेक्षा राखेको छ । तिनको लागानी यहि देशमा हुनुपर्छ । तिनको बैक व्यालेन्स यहि देशमा हुनुपर्दछ । तिनको पूजी यहि देशका कुना कन्दरा पाखा भित्तामा सिंचित हुनुपर्दछ । नेपालका हरेक भाग छुने बाटो घाटोले, तिर्खाएको खेतवारीले, जढिबुटिले र नदीनालाहरुले विनोद चौधरीको पूजि र प्रवृधिलाई पर्खेर बसेका छन् । त्यो खाली धनि हुन मात्र उक्साउने विदेशी “फोब्र्स” पत्रिकामा नाम निकाल्नु भन्दा विकासको अवतार लिएर यहि देशको धरतीका पानाहरुमा विनोद चौधरी भएर सुचिकृत हुनु नै तीन करोड नेपालीको शान हो ।
Last Updated on Saturday, 09 March 2013 11:15
मधेशीदलद्धारा नागरिकता मुद्धामा अडान, राष्ट्र समाप्तीको षड्यन्त्र
देशको आवस्यकता र न्यायलयको तदर्थ भूमिका
मगर आफै पछि परेको होइन,पारिएका हुन् ।
“उच्च जातले विगारेको हो“ प्राध्यापक जोन गाल्टुङ